शोभित बस्नेतकै कारण ‘डाँडाको वरपिपल’ फ्लप, सिंगै हलमा ६ जना दर्शक ! – News543Online
October 15, 2021 adminLeaveaComment on शोभित बस्नेतकै कारण ‘डाँडाको वरपिपल’ फ्लप, सिंगै हलमा ६ जना दर्शक !
शोभितले नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल नभएर भुवन केसी हुन् भन्दै विभिन्न मिडियामा अन्तरवार्ता दिए ।
उनले आफ्नो चलचित्रलाई चर्चामा ल्याउन अपनाएको यो ह’त्कण्डा अन्ततः आत्मघा’ति सावित भयो । चलचित्रमा गरिएको करोडौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसो त डाँडाको वरपिपल रिलिज हुनुपूर्व नै फ्लप बन्ने छनक देखिएको थियो । राजेश हमालको महानायकत्वमाथि प्रश्न उठाएकाले भुवन, शिव र शोभितसँग दर्शक आ’गो बनेका थिए
। राजेश हमालका समर्थक दर्शकले यस चलचित्रका गीतमा ‘डिसलाइक’ को अभियान नै चलाएका छन् ।
साथै, युट्युटदखि टिकटकसम्म आएका प्रतिक्रियामा धेरैले यो चलचित्र ब’हिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
चलचित्रको लगानी धरापमा पर्ने देखेपछि निर्देशक बस्नेतले आफूलाई सच्याउन पनि खोजेका हुन् । आफूले गल्ति बोलेको भनेर मा’फी मागे । चलचित्रको एउटा कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्वीरलाई प्रमूख अतिथि बनाए ।
एक टिभी प्रस्तोताको मध्यस्थतामा राजेश हमालको प्रवचन पनि सुने । तर केही गर्दा पनि दर्शक उनीसँग खुशी भएनन् ।
अहिले पनि शोभितमाथि गा’लीको वर्षा भइरहेकै छ । उनीमात्र नभएर राजेश हमाललाई महानायक नमान्ने जोकसैलाई दर्शकले लखेटिरहेका छन् ।
सुपादेउराली दर्शन गरि फर्कदै गरेको जीप ढिकुरामा दुर्घट्ना, ७ जना घाइते (घाइतेको विवरण सहित)